Basal implantation - တဦးတည်းသွားပွနျလညျထူထောငျနည်းလမ်းများ။ အဆိုပါ implants အရှင်မေးရိုး၏တစ်သျှူးများ၏ Basal အလွှာတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောကပိုသိပ်သည်းသည်နှင့်ကျုံ့ခံယူမထားဘူး။ ခြေတု၏ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းအချို့အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားသာချက်လုံခြုံစွာသူတို့ထဲကအများစုဟာများအတွက်လျော်ကြေးပေးမြောက်မြားစွာရှိပါသည်။
အခါ Basal implantation technique ကိုပြ?
implantation - အံသွား restore မှအများဆုံးသဘာဝအလမ်း။ ဒါဟာသင်အစားထိုးခွင့်ပြုသဖြင့်, အစွန်အဖျားများနှင့်အမြစ်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမေးရိုးထဲမှာမတူညီတဲ့နေရာ implants မဆိုအရေအတွက်ကို၏ installation ပါဝငျသညျ။
သမရိုးကျနည်းလမ်း Prosthesis မတူပဲ Basal implantation Single-အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာယင်း Prosthesis တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအရပျ၌သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ implants ထည့်များအတွက်ဂန္ထဝင်အစီအစဉ်ပြင်ဆင်မှုကိုအနည်းဆုံးခြောက်လကြာနေစဉ်။
Basal ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွား implantation လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်အဓိကလက္ခဏာများနေသောခေါင်းစဉ်:
မေးရိုး restore ရန်လိုအပ်ကြောင်းအလွန်မြန်;
အဆိုပါ Basal သွား implants ၏နိယာမ
ဖောက်ခြင်းဖြင့်သတ်မှတ် Basal မှာ implants ခြေတု, ဒါကြောင့်စစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်နှင့်လိုအပ်သောအကြီးစားခွဲစိတ်စေ။ ကြောင့် Prosthesis နက်ရှိုင်းသည့်အစိုင်အခဲတစ်ရှူးသို့ထည့်သွင်းကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကငြင်းပယ်ခံရများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
ယာယီ implants တည်ထောင်ရန်ဖို့ Basal implants အတုအမြစ်များများ၏အကောင်းအဆိုး cons အကဲဖြတ်ပြီးနောက်။ သူတို့ကအလွယ်တကူကွဲပြားခြားနား၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှ adapts အထူးပစ္စည်းထားကြပါတယ် ကိုက် ။ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိပလပ်စတစ်သွားများနှင့်အတူအချိန်နှင့်အတူသွားလာရကြ၏။ ဤအချိန်အတောအတွင်းတုအံကပ်လိုအပ်သောပုံစံယူလိမ့်မယ်, နှင့်အခြေခံပေါ်မှာကအမြဲတမ်းထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည် ပန်းဦးရစ်သရဖူကို ။
အဆိုပါ Basal implantation - အကောင်းအဆိုး cons
ခြေတု၏ Basal နည်းလမ်းအများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်:
implants အရှိဆုံးကသဘာဝရတဲ့နေကြသည်။ ထိုအသင်သည်ထိုသူတို့ဂရုစိုက်အဖြစ်အမှန်တကယ်အံသွားဘို့ရန်လိုအပ်သည်။
ဒီနည်းလမ်းကိုအားဖြင့်အတုအံသွားအများကြီးပိုလွယ်ခြင်းနှင့်ပိုမြန်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ - သူတို့ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ကအစပိုင်းတွင်မျှမျှတတတည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့ဆင်ခြင်၏။
တပ်ဆင်ဒဏ်ရာရအရိုး implants စဉ်အတွင်းအနည်းဆုံးသောကွောငျ့, ကအများကြီးပိုမြန်ပျောက်စေတော်မူ၏။ တစ်ဦးကအပြည့်အဝဒြပ်ဝါးမေးရိုးရက်အနည်းငယ်တပ်ဆင်ပြီးနောက်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကကြီးမားသောပေါင်း - ကြာရှည်ခံမှု။ Basal တုအံကပ်ငါးနှစ်၏ပုံမှန်ပ္ပံ၏အကောင်းဆုံးသက်တမ်းစဉ်အများအပြားသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
သာမန် Prosthesis အရိုးတိုးပွားလိုအပ်နိုင်ပါသည်တဲ့အခါမှာ - ၎င်း၏ကျုံ့မှာ။ Basal နည်းလမ်း maxillary sinuses မြင့်တက်ထားတဲ့ကာလအတွင်းအကှေ့ဓာတ်လှေကားစစ်ဆင်ရေး, ဒီခြေလှမ်းဖယ်ရှား, ထိုသို့နှင့်အတူ။
Basal implants ပင် periodontal ရောဂါအဆင့်မြင့် form မှာထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်အံပဲ့လျှင်ဤပြဿနာကိုအလွယ်တကူသွားဆရာဝန်တစ်တစ်ခုတည်းခရီးစဉ်အတွင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံး implants ပြောင်းနည်းမလိုအပ်ပါဘူး။
ထိုကဲ့သို့သော Basal implants ၏, အားနည်းချက်တွေဖြစ်စေ:
ဒါဟာတော်တော်များများအံသွားမရှိခြင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော Prosthesis နှုနျးမှအများဆုံးမည်မျှပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Basal implants သွင်းယူပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဆုံသောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အကွိတျပေါ်လာလိမ့်မည်။
အဆိုပါနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူလူများအတွက် Basal implants, ဦးနှောက်အာရုံကြောများနှင့် endocrine စနစ်များကိုမထောက်ခံပါ။
သူ့မျက်စိအောက်မှာအမည်း - အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသရေး
TCA peels - အန္တရာယ်များတဲ့ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်အရေပြားနုပျိုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု?
လေဆာရောင်ခြည်၏မျက်နှာပေါ်မှာသွေးကြော "ကြယ်ပွ" ၏ဖယ်ရှားရေး
မျက်တောင်များအတွက် Burdock ရေနံ
မျက်နှာပေါ်မှာအညိုရောင်အစက်အပြောက် - အကြောင်းတရားများ
သွား cyst - ကုသမှု
သွားဖုံးအပေါ်အဖြူ patch ကို
ဂျာကင်အင်္ကျီစားဆင်ယင် - တ fluffy အင်္ကျီနှင့်အတူဂျာကင်အင်္ကျီကိုဆင်းဝတ်ဆင်သွားပါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း
ဆံပင်အရောင် 2014 ခုနှစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
အစားအသောက်: သီးခြား power supply
ပြောင်းဆန် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ဘယ်လောက်အပူချိန်ကလေးတစ်ဦးအတွက် Ari မှာသိုထားသလဲ?
အာပဒ် Busson စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အရက်ထဲမှာဟောင်းသတို့သမီး Uma Thurman စွပ်စွဲ
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ခရမ်းချဉ်သီး - savory ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ဘေ့စ်ဘောကြယ်ပွင့်အဲလက်စ် Rodriguez နှင့်တွေ့ဆုံ